के तपाईं लगातार एक्सन भिडियो गेम खेल्नुहुन्छ ? सावधान ! « Karobar Aja
के तपाईं लगातार एक्सन भिडियो गेम खेल्नुहुन्छ ? सावधान !
दस्तावेज ,श्रावण २९ गते आईतबार २०७४,काठमाडौं – के तपाईं खालि एक्सन भिडियो गेम खेल्नुहुन्छ ? सावधान हुनुस् । यसले तपाईंको मस्तिष्कको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको मुख्य अवयवका रूपमा रहेको ‘ग्रे म्याटर’ मा कमी आउन सक्छ । यसले गर्दा तपाईंमा तनाव, सिजोफ्रेनिया र अल्जाइमर जस्ता रोगको खतरा बढ्न सक्छ ।
सय जना महिला पुरुषमा गरिएको यो अध्ययन मलिक्युलर साइकियाट्री जर्नलमा प्रकाशित छ । उक्त अध्ययनअन्तर्गत ५१ जना पुरुष र ४६ जना महिलालाई थुप्रै एक्सन गेम ९० घण्टासम्म खेल्न दिइएको थियो । गेम खेल्न बानी परेकाहरूको मस्तिष्क स्क्यान गरेर त्यसको तुलना गेम नखेल्ने व्यक्तिसँग गरियो । गेमका अम्मली व्यक्तिको मस्तिष्कमा ग्रे म्याटरको कमी रहेको पाइयो । अध्ययनमा के देखियो भने, गेम खेल्दा मस्तिष्कमा परिवर्तन हुन्छ ।
अनुसन्धानअनुसार, एक्सन गेम खेल्न बानी परेका व्यक्तिको हिप्पोक्याम्पसमा ग्रे म्याटर कम हुन्छ । हिप्पोक्याम्पस मस्तिष्कको यस्तो ठुलो खण्ड हो, जो विगतको अनुभव सम्झिराख्नलाई जिम्मेवार हुन्छ ।
पहिलेका थुप्रै अध्ययनमा के देखिएको थियो भने, हिप्पोक्याम्पसमा कमीले व्यक्तिमा मस्तिष्कसम्बन्धी रोग उत्पन्न हुने जोखिम हुन्छ । यसअन्तर्गत पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिजअर्डर, अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया र तनाव हुन सक्छ ।
भिडियो गेमले मस्तिष्कको संज्ञानात्मक प्रणालीलाई फाइदा हुन्छ । यो विशेष रूपमा भिजुअल अटेन्सन र कम अवधिको स्मृतिसँग सम्बन्धित छ ।